Lloris on anger!!! ကမ္ဘာ့ဖလားပျော်ရွင်မှုအိမ်မက်များကနေနိုးထဖို့လိုပြီ – Miracle Times
Lloris on anger!!! ကမ္ဘာ့ဖလားပျော်ရွင်မှုအိမ်မက်များကနေနိုးထဖို့လိုပြီ
Goalkeeper Hugo Lloris urges France need to wake up from World Cup victories from 2018. France are onafive-match of losing mark streak after drawing 1-1 with Ukraine in their last game.
“It is time to forget about the 2018 World Cup champion Team. We are losing faith and there is no progress. It’s time to move on. We need to get out of the current situation against Finland next match,” he carried out the message.
Coach Deschamps mentioned there was little progress but was angry at the result obviously. France have drawn their last five games inarow and struggled to bounce back against Ukraine in the last match.
ပြင်သစ်အသင်းသားများအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားအောင်မြင်မှုများဆီကနေ နိုးထပြီးလက်တွေ့အခြေအနေများကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ဂိုးသမား ဟူဂိုလိုးရစ်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှဦ တစ်ဂိုးစီ သရေကျပြီးနောက် ငါးပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆိုတာကိုမေ့ထားရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေပြီး တိုးတက်မှုလဲမရှိပါဘူး။ ကစားသမားတစ်ယောက်ခြင်းဆီက ပိုကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးတွေပြသရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ လာမယ့် ဖင်လန် နဲ့ပွဲမှာ လက်ရှိအခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့လိုပါတယ် လို့ သူကဆိုပါတယ်။
နည်းပြဒက်ချမ့်စ်ကတော့ တိုးတက်မှုအနဲငယ်ရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်ရလဒ်ကိုတော့ ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းဟာ နောက်ဆုံးငါးပွဲဆက်တိုက် သရေကျနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှာလည်း ချေပဂိုးရအောင် နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။
Liverpool are ready for the offered price of Dortmund ဘယ်လင်ဂမ်အတွက် ကြိုက်စျေးပေးမယ့် လီဗာပူးလ်
Marnry scoredagoal!!! မာနရီ ဂိုးသွင်းပြီ